Published November 2, 2020 at 9:05 PM CST
Booliska Magaalada Sioux ayaa baaraya seddex toogasho laga soo bilaabo Axadii, oo uu kujiro mid isku badalay mid dilaa ah.
Solomon J. Blackbird oo u dhashay magaalada Sioux City ayaa xalay lagu toogtay banaanka dhisme dabaq ah oo ku dhow Grandview park xalay. Waxaa la sheegay inuu ku dhintay isbitaalka. Marka, illaa iyo hadda cidna looma qaban kiiska.
Laba toogasho oo kale ayaa ka dhacay habeen hore dhowr meelood oo u jira Cook Park.
Booliska ayaa sheegay in saddexda dhacdo aysan xiriir la lahayn.
Iowa waxay durba aragtay diiwaan galinta hore ee cod bixiyaasha, xitaa bartanka masiibada. Iowans doonaya inay si shaqsi ah u doortaan berri waxaa si weyn loogu dhiirigelinayaa inay xirtaan maaskaro, in kastoo saraakiisha maxalliga ah ay yiraahdaan ma amri karaan.
Codbixiyeyaashu maahan inay bixiyaan ogeysiis horudhac ah oo loogu talagalay codbixinta haddii ay dhici karto inay soo gaareen COVID-19. Laakiin waxaa lagu dhiirigelinayaa inay wacaan xisaabiyahooda degmo kahor, ama ay la yimaadaan qof iyaga wata si uu ugu wargaliyo sarkaal gudaha goobta codbixinta ah.
Sababtoo ah COVID-19, isbeddel ku yimid Fasaxa Nalalka Fasaxa ee bartamaha magaalada Sioux City.
Wada-hawlgalayaasha Downtown Partners ayaa leh halkii ay dadku ka istaagi lahaayeen waddooyinka si ay u daawadaan, soo-gelinta gaafwareegayaasha ayaa hareerayn doonta wadada.
Daawadeyaashu way wadi karaan dariiqa safarka si ay u arkaan qulqulaya iftiinka iyo xitaa Santa.
Dhacdadu waxay dhacaysaa Isniinta ka hor Thanksgiving, Nofeembar 23-keeda oo bilaabmaysa 6:30 pm. Doomaha sabeynaya ayaa dhigan doona wadada seddexaad wadada ka timaadda Virginia ilaa Nebraska oo ay la socon doonaan geed fasax ah 4 iyo Nebraska.
Saraakiisha caafimaadka ee maxalliga ah ayaa sheegaya in Gobolka Woodbury uu sii wado inuu arko tiro aad u tiro badan oo ah kiisaska COVID-19. Waxaa jirey…
Heerka shaqo la'aanta ee Iowa bishii Sebtember wuxuu hoos ugu dhacay 4.7%, wuxuu sii wadaa isbedelka shanta bilood ee shaqaalaynta kadib markii dhaqaalaha…
Labaatan iyo laba reer Iowans ah ayaa u dhintey dhibaatooyinka COVID-19 24-kii saac ee la soo dhaafey, iyadoo ku dhowaad 1,200 kiisas cusub la soo…
Inbadan oo reer Iow ah ah weligood kahor ayaa isbitaal ladhigay sababo laxiriira dhibaatooyinka COVID-19. Tirada hadda, sida ku cad bogga internetka ee…